China PE-RT amanzi ashushu nabandayo umbhobho mveliso kunye nabenzi | Shengyang
Ukuzinza okugqwesileyo kobushushu kunye nokumelana nobushushu ixesha elide
Umbhobho unehomogeneity elungileyo kunye nokusebenza okuzinzileyo. Ukusetyenziswa kwenkqubo yamanzi ashushu kunokuqinisekisa ukusetyenziswa kweminyaka engama-50.
Ukusebenza kakuhle kokusebenza kunye nomgangatho ozinzileyo
Umbhobho we-PE-RT awunyanzelekanga ukuba udlule kwinkqubo yokunxibelelana umnqamlezo, akufuneki ulawule inqanaba lokudibanisa umnqamlezo kunye nokufana, kukho amakhonkco emveliso ambalwa, imveliso iyafana, kwaye umgangatho uzinzile kwaye uthembekile. Flexible kwaye kulula ukuyisebenzisa
Ingadityaniswa kwaye igotyiwe, kunye nomgama omncinci wokugoba (Rmin = 5D), kwaye awuphindaphindi. Uxinzelelo kwinxalenye egotyiweyo inokukhululeka ngokukhawuleza, kuthintelwe umonakalo wepayipi kwindawo yokugoba ngenxa yoxinzelelo lwexinzelelo ngexesha lokusetyenziswa. Ulwakhiwo kwindawo enobushushu obuphantsi, akukho sidingo sokulungiselela umbhobho kwangaphambili, ulwakhiwo olufanelekileyo, ukunciphisa iindleko.
Ukuchasana nefuthe elungileyo kunye nokhuseleko oluphezulu
Ubushushu obushushu obuphantsi bunokufikelela kwi-70 ° C, enokuhanjiswa kwaye yakhiwe kwindawo enobushushu obuphantsi; Amandla ayo okumelana neempembelelo zangaphandle aphezulu kakhulu kuneminye imibhobho yokuthintela ukonakala kwinkqubo ebangelwe lulwakhiwo olurhabaxa.
Ukuphinda isebenze kwakhona
Akukho kungcoliseka kwendalo ngexesha lemveliso, ulwakhiwo kunye nokusetyenziswa. Inkunkuma inokuphinda isetyenziswe kwaye yeyimveliso eluhlaza.
Ukuqhuba kakuhle kobushushu
Ukuqhutywa kwe-Thermal yi-0.40W / mk, kufanelekile kwimibhobho yokufudumeza umgangatho.
Unxibelelwano olushushu-olunyibilikileyo, kulula ukulungisa
Unxibelelwano olunyibilikayo olushushu, i-PE-RT ibhetele kakhulu kune-PEX kwindlela yoqhagamshelo kunye nokulungiswa.